Soo-saareyaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Raw Boldenone Cypionate - Warshadda
Boldenone cypionate budada ah waa steroid anabolic androgenic kaas oo laga soo qaatay testosterone. Waxay leedahay hindhiso cypionate taas oo soo saartaa sii-deyn sii-deg ah ee walaxda dhiigga ee toddobaadka 2. Tani waxay ka dhigaysaa budada cypionate budada ah steroid fudud si ay u isticmaalaan ciyaaryahano badan sababtoo ah ma aha sida xanuun leh ka dib markii duritaanka. Waa maxay calaamadaha maaddadani waa dhererka wareegga kaas oo caadi ahaan sii dheeraanaya si loo helo saameyn la ogaan karo oo ifosto ah.
Qalabka Root Boldenone Cypionate (106505-90-2) video
Root Boldenone Cypionate budada (106505-90-2) Description
Boldenone Cyp waa steroid anabolic androgenic kaas oo laga soo qaatay testosterone. Waxay leedahay hindhiso cypionate taas oo soo saartaa sii-deyn sii-deg ah ee walaxda dhiigga ee toddobaadka 2. Tani waxay ka dhigaysaa budada Root Boldenone Cypionate budo si fudud oo loo isticmaalo ciyaaro fara badan sababtoo ah ma aha mid xanuun leh kadib duritaanka. Waa maxay calaamadaha maaddadani waa dhererka wareegga kaas oo caadi ahaan sii dheeraanaya si loo helo saameyn la ogaan karo oo ifosto ah.
Boldenone waa steroid anabolic iyo derajada synthetic ee testosterone in asal ahaan loo horumariyo isticmaalka xoolaha. Waxay kordhin kartaa xajinta nitrogen, synthesis protein, iyo rabitaanka cuntada, waxayna sidoo kale kicineysaa sii deynta xeryaha wanaajinta ee kilyaha. Boldenone Cyp, oo ah nooc ka mid ah Boldenone, oo leh saameyn isku mid ah Boldenone. Root Boldenone Cubionate Cypionate waa farsamo ee boldenone waxaana lagula talinayaa inay noqoto gargaar loogu talagalay daaweynta fardaha la biskoodo marka kor u kaca miisaanka, dharka timaha ama xaaladda jireed guud ahaan la doonayo.
Root Boldenone Cypionate budada (106505-90-2) Smamnuucista
Product Name Root Boldenone Cypionate budada (106505-90-2)
Magaca Kiimikada 17β-hydroxy-androsta-1,4-dien-3-hal cyclopentanepropionate
brand NAme Boldenone Cyclopentanepropionate, Boldenone Cypionate budada
Fasalka Daroogada Intermediates & Kiimikooyinka Fine; Farmashiyaha; Steroids: boldenone
Molecular Wsideed 398.58
barafku Psaliid 33-37 ° C
SOlubility Ku dhowaad xallin la'aanta biyaha, ku dhex dar saliidda cuntada
Boldenone Cyp Application Wixii foosha jirka iyo daaweynta fardaha la biskoodo.
Waa maxay budada loo yaqaan "Raw Boldenone Cypionate" (106505-90-2)?
Boldenone Cypionate budada ah waa muusik ah boldenone. Qiyaastu waxay ka timaaddaa dhul dabiici ah oo ugu yaraan hal kooxood oo ka mid ah kooxeed waxay qaadataa meesha hal koox oo halxidh ah si ay u abuuraan dhismaha cusub. Xaaladdan oo kale, budada lafaha boldenone waxay ka timaaddaa testosterone. Waxay cayaareysaa lacag dheeri ah oo dheeraad ah. Boldenone cypionate budada ah waa nooc ka mid ah baaritaanka testosterone oo leh lahaansho labadaba 1 iyo 2. Tani waxay hoos u dhigeysaa awoodda ay u leedahay in lagu sumoobo estrogens iyo awoodda anabolic. Waxay leedahay lahaan cilad faleed fenylpropionic to kooxda 17-beta hydroxyl. Bustenone cypionate budada waa budo, si ka duwan maaddooyinka kale ma aha mid fiican oo uu leeyahay dhar qaro weyn oo ay u egtahay inay adkaato oo noqoto mid qaboobo.
Boldenone waa steroid anabolic androgenic inta badan sida caadiga ah loo isticmaalo deegaannada caafimaadka xoolaha marka loo eego daaweynta aadanaha ku salaysan. Boldenone Cypionate budada, sida kuwa kale ee steroids anabolic antholic androgenic, waxaa loogu talagalay inay la jaanqaado saameynta testosterone. Waxay siisaa awood ay ku dhisaan dhismaha unugyada iyo horumarinta jinsiga.
Iyada oo ku xiran soo saaraha iyo waddanka laga sameeyay, waxaa laga heli karaa qaababka la isku mudo ama afka. Ka hor intaadan dooran nooc ka mid ah boldenone, ogow faraqa u dhexeeya iyaga. Farqigaas waxaa lagu ogaan doonaa asalkiisa. Boldenones pioneering budada (iyo noocyo kale) ee Maraykanka ayaa kaliya loogu talagalay isticmaalka xoolaha.
Sida Sare Boldenone Cypionate (106505-90-2) shuqullada
Qalabka cypionate wuxuu ku xiran yahay Boldenone adoo adeegsanaya tijaabooyinka hoose ee dhulka hoostiisa si loo yareeyo nolosheeda nuska ah si loogu isticmaalo waxqabadka degdegga ah ee jirka iyo kuwa cayaaraha. Qalabyadu waa qaybo ku xiran daroogada aasaasiga ah ee wax ka beddelaya xaddiga nuugista ee daroogadaas maadaama ay ku dhex martay dhiigga. Qiimeeyayaasha kala duwan ayaa xakamiya sida ugu dhakhsaha badan ama si tartiib ah daroogada loo sii daayo ama ay u nuugaan jirka. Dadka ajnabigaa waxay sidoo kale saameyn weyn ku leeyihiin muddada waqtiga daawada ay ku bixiso dhaqdhaqaaqyadooda jirka waqti ka dib.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah qiimeeyaashu waxay u oggolaanayaan in si dhaqso ah loo nuugo daroogada jidhka laakiin saameyntu maaha mid aad u dheer. Kuwa kale waxay yareeyaan sii deynta daroogada jidhka si ay saameyn ugu yeelato maalmaha ugu dambeeya ama xitaa toddobaadyo, mararka qaarkoodna waqti dheer. Dhaqdhaqaaqa ay bixiyaan daroogooyinka, sida Boldenone cypionate budada ayaa lagu qiyaasaa noloshooda nuskood. Dhisidda jirka, nolosha nusku waa muhiim. Mudada dheer ee nolosha nuska, irbadaha yar yar ama qiyaasaha loo baahan yahay.
Root Boldenone Cypionate budada (106505-90-2) Qiyaasta
Raadinta qiyaasta Boldenone cypionate ee bixisa saamayntu waxay noqon kartaa mid khafiif ah sababta oo ah arrimo badan oo kale ee natiijooyinka noocan ah waa in la tixgeliyaa. Isticmaalayaasha qaarkood waxay isbeddelaan isbeddelka toddobaadka labaad ama saddexaad. Xaalado kale oo ay u baahan yihiin inay isticmaalaan afar ilaa shan wiig si natiijooyinka ugu wanaagsan.
Qiyaasta daawada loo qoondeeyey celcelis ahaan 100 mg, qaar ayaa sheeganaya in wax ka yar, sida 50 mg. Ma bixin doonto saameyn badan haddii aan lagu darin nooc kale oo ah testosterone. Dhismaha jirka ee isticmaalaya budada Boldenone pioneering waxaa badanaa lagu taliyaa in loo isticmaalo qiyaasta midda mid ah iyada oo loo isticmaalayo isticmaalka budada lafdhabarta ee testosterone sababtoo ah waxay bixisaa natiijooyin isku mid ah oo ku saabsan firfircoonida iyo firfircoonida nolosha nuska ah.
Qalabaynta jirka oo isticmaalaya Equipoise (Boldenone undecylenate) ayaa caadi ahaan ku xoqa 200 mg ilaa 400 mg toddobaadle ah, qiyaasta qiyaasta laba ama seddex irbadood si looga fogaado waxyeelooyinka sida maqaarka maqaarka ama xanuunka kudhaca goobta xannibaadda. , waxay ku xiran tahay doorbidid shakhsiyadeed, waxay joogi kartaa meel kasta oo ka socota lix ilaa todobaad ama ka badan.
Root Boldenone Cypionate budada (106505-90-2) Faa'iidooyinka
Boldenone Cypionate waa nooc aad u xoog badan oo ah Boldenone Undecyclenate. Waxay ka xoog badan tahay version-keeda. Boldenone Cypionate waxay ku siinaysaa cunto aad u liidata oo ku salaysan borotiinka hodanka ah iyada oo aan wax haysanin biyo. Maadaama boombada biyaha aysan si weyn ugu kordhineynin dhexdhexaadiyaha muruqa, inta baaxadda wayn ee laga helay wareegga Boldenon Cypionate waa la hayn karaa ka dib markii daroogada la joojiyay.
iibso Boldenone Cypionate budada laga bilaabo Buyaas.com